Pregnancy – Page6– Healthy Life Journal
All posts tagged "Pregnancy"
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ကျန်းမာရေး (၂)
ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ကျက်အောင် ချက်စား ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အသိဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး စားသောက်ရပါမယ်၊ စုံလင်ရမယ်၊ မျှတရမယ်၊ အာဟာရပြည့်ဝရပါမယ်။ နို့၊ ဥ၊ အသားတွေ စားရင် သေသေချာချာကျက်အောင် ချက်ပြုတ်ပြီး စားသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ကြက်ဥ ၊ ဘဲဥကို...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ကျန်းမာရေး (၁)
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲ ကလေးလေးတစ်ယောက်ကို ချောချောမောမော မွေးဖွားနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ ပူပင်သောက အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ချစ်ခင်ပွန်းရဲ့တာဝန်က အတော်လေးကြီးမားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဘေးကနေ ဖေးမကူညီအားပေးတဲ့၊ နှစ်သိမ့်တဲ့၊ နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာတရားဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဇနီးသည်အတွက် ကြီးမာတဲ့အင်အားကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်...
မွေးလမ်းမှ သွေးသွန်ခြင်း (Bleeding PV)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ . . . သမီးက သားဖွားဆရာမတစ်ယောက်ပါရှင်။ Case အားလုံးကိုတော့ မသိနားမလည်ပါရှင်။ အခုတလော သွေးဆုံးပြီးမှ ရာသီပြန်လာတဲ့ Case တွေ တွေ့နေရတယ်ဆရာ။ အသက် ၆၀ ကျော်တွေပေါ့ဆရာ။ အိမ်ထောင်ရှိသူတွေလည်းပါသလို ခင်ပွန်းဆုံးသူတွေလည်းပါတယ်ဆရာ။...
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေမည့် နည်းလမ်းကောင်း
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက်ရင် ကျန်းမာပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရင်သွေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ (၁) လေ့ကျင့်ခန်းကို ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပါ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းစေတယ်ဆိုတာ လူအများသိပြီးသားပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ညင်သာတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ကြည့်ကောင်းစေပြီး...
ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် ကလေးမမွေးသေးဘဲ ဗိုက်နာခြင်း မေး ။ ကျွန်မကိုယ်ဝန်က ၂၆ ပတ်ပါ ဆရာ။ သားဦးကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးမွေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကလေး မမွေးသေးဘဲ နာတာမျိုးဖြစ်ရင် အဲဒီနာတာနဲ့တကယ်ကလေးမွေးချင်လို့ နာတာကို ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်ပါမလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ သားကြောဖြတ်ခြင်း မေး. အပြင်မှာ ကလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အခုကိုယ်ဝန်နဲ့ပါ။ ကလေးမွေးရင်း သားကြောဖြတ်ချင်ပါတယ်။ သားကြောဖြတ်လိုက်ရင် နေရထိုင်ရတာ ဘယ်လိုဆိုးကျိုးများရှိနိုင်ပါသလဲ။ ဆရာ့အကြံဉာဏ်လေး လိုချင်လို့ပါရှင့်။ ဖြေ. သားကြောဖြတ်တယ်ဆိုတာ သားအိမ်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ သားဥပြွန်လေးကိုဖြတ်ပြီး ပြန်ချည်လိုက်တာ။ သားဥပြွန်လေးက ကလေးရဖို့...
ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ် ဆီးခုံဖောင်းပြီး တင်းခြင်း
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ မေး ။ ညီမက မနက်အိပ်ရာထရင် ဆီးခုံက သိသိသာသာတင်းပြီးဖောင်းနေပါတယ်။ မသိရင် ကိုယ်ဝန်ရှိသလိုမျိုးဖောင်းနေတာပါ။ ဆီးသွားပြီးရင်တော့ ပြန်ချပ်သွားပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်လောက်ကစစ်ကြည့်တော့ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာ ကျောက်တည်တာ ဘယ်ဘက်မှာ ၃လုံး၊...
သားသားမီးမီး လိုချင်သူ အိမ်ရှင်မတို့ စားသင့်သည့် အာဟာရ
၊ မိမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ကလေးရဖို့ ခက်ခဲနေတယ်လို့ ထင်ပါသလား။ ကိုယ်ဝန်မရအောင် ကာကွယ်တားဆီးမှု မလုပ်ဘဲ တစ်နှစ်ကြာချိန်အထိ ကလေးမရရင် သားဖွားမီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ကလေးယူနေချိန်မှာ အောက်ပါ အစာတွေကို ပုံမှန် စားပေးရင် ကိုယ်ဝန် မြန်မြန်...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ကလေးမွေးပြီးရင် အခုကြီးနေတဲ့ သားအိမ်က ပြန်ချပ်ပါ့လား . . . မေး ။ အခုကိုယ်ဝန်ဆောင်လာချိန်မှာ သားအိမ်က တအားကြီးလာပါတယ်။ အဲဒီသားအိမ်က ကလေးမွေးပြီးချိန်မှာ နဂိုအနေအထား ပြန်ဖြစ်ပါ့မလား၊ ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက် အချိန်ယူရပါ့မလဲ၊...
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ကာကွယ်ဆေး မေး. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ဘယ်လိုကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးလို့ရပါသလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်ဆေးတွေ မထိုးသင့်ဘူးလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ဖြေ. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ထိုးပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ထိုးရသလဲဆိုရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် ပထမသုံးလကျော်သွားရင် ကြိုက်တဲ့အချိန်...